I-Silicon Valley Bigs ijonge iiNdawo eziMkhulu zoKwakha iiMoto eziZimeleyo eziLandelayo | IPhone iindaba
I-Apple, uGoogle kunye nabanye abavelisi bafuna iindawo ezinkulu, ngokuthengisa izindlu nomhlaba kwindawo yaseSan Francisco, ukuphuhlisa izithuthi zabo ezizimeleyo. Wonke umntu uyazi ukuba uGoogle usebenze kolu hlobo lwesithuthi iminyaka eliqela, kwaye enyanisweni sele efumene iimvume zokujikeleza kwindawo yaseSan Francisco ngaphandle koloyiko lokuba amapolisa aza kukumisa ayithimbe imoto yakho. Kodwa ayinguye yedwa. I-Apple ikwangaphezulu konyaka, ngokutsho kwamahemuhemu, inomdla wokuzisa isithuthi kwintengiso, esingazi nto ncinci ngayo, kodwa yonke into ibonakala ngathi iya kuba sisithuthi esingaqhubi.
Kodwa ayisiyi-Apple kunye noGoogle kuphela abagxile kwezi ntlobo zezithuthi, kodwa iToyota, iTesla, iBMW, iMercedes kunye neFord zikwezinye iinkampani ezifuna iindawo ezinkulu apho zinokuphucula khona izithuthi zazo ezizimeleyo. Ngokwapapasho, uGoogle ujonge indawo ekufutshane neenyawo ezingama-800.000 ezinje ngeApple. Zombini ezi nkampani zifuna yandisa uphando lwayo kunye namasebe aphuhlisiweyo Imiselwe le misebenzi ukuze ikwazi ukuvavanya nokuvavanya iimodeli ezahlukeneyo ezenziweyo.
Umzekelo. Indawo yeTesla apho okwangoku bevelisa iimodeli zangoku zinendawo yeenyawo ezizizigidi ezi-5,3, kwaye ibekwe eFremont, eCalifornia, kodwa ngumzi-mveliso ongezizo iziko lophando, kungoko umahluko phakathi kwendawo efunwa nguGoogle kunye I-Apple kunye naleyo yomzi-mveliso yokwakha izithuthi ezihamba phambili. Njengoko besixele kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, iApple irente iindawo zokugcina ezahlukeneyo izinto ezahlukeneyo eziza kuba yinxalenye ye-Apple Car, iinqanawa ezifumana amagama ahlukeneyo ahambelana neentsomi zamaGrike.
Okwangoku, akukho nto ingako siyaziyo malunga nokuba iqhubeka njani iprojekthi yeTitan, apho iApple isebenza ukuzisa imoto yokuqala yenkampani kwintengiso, ngaphandle kwalonto umphathi weprojekthi omtsha ngusekela mongameli wobunjineli eTesla ukuba utyikitye kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Amakhwenkwe amakhulu eSilicon Valley akhangela iindawo ezinkulu apho aya kuphuhlisa khona izithuthi ezizimeleyo ezilandelayo